बेदकोटलाई व्यवस्थित बस्ती र व्यवस्थित सहर सहितको नगरपालिका बनाउछौंः मेयरका उम्मेदवार बोहरा - आभाषकुन्ज
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ताबेदकोटलाई व्यवस्थित बस्ती र व्यवस्थित सहर सहितको नगरपालिका बनाउछौंः मेयरका उम्मेदवार बोहरा
बेदकोटलाई व्यवस्थित बस्ती र व्यवस्थित सहर सहितको नगरपालिका बनाउछौंः मेयरका उम्मेदवार बोहरा
महेन्द्रनगर । बेदकोट नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नगर प्रमुखको उम्मेदवार हुन्, भोजराज बोहरा । २०३५ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमा प्रवेश प्रवेश गरेका बोहरा, देशमा लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि दर्जनौं पटक जेल जिवन विताएका व्यक्ति हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले २०७९ को स्थानीय निर्वाचनका लागि नेता बोहरालाई कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाको मेयर (प्रमुख) पदको उम्मेदवार बनाएको हो । बेदकोटलाई व्यवस्थित बस्ती र व्यवस्थित सहर सहितको नगरपालिका बनाउने मेयरका उम्मेदवार बोहराको संकल्प छ । उनले नगरपालिकालाई नगर क्षेत्र र ग्रामिण क्षेत्र गरेर विकासका योजना थाल्ने रणनीति बनाएका छन् ।
बेदकोटमा खेती योग्य जमिनलाई नष्ट गरेर पक्की भौतिक संरचना बनाउने होडबाजी चलिरहेको हुँदा त्यसमा व्यवस्थित तवरले रणनीति बनाएर अगाडी बढ्नु पर्ने मेयरका उम्मेदवार बोहरा बताउछन् । बस्ती तथा भौतिक संरचना बनाउनका लागि खेति योग्य जमिनको प्रयोग कमभन्दा कम मात्रामा गर्ने, त्यो जमिनको माटोको गुणस्तर परिक्षण गरि कृषकहरुको आर्थिक स्तर उकास्न उपयुक्त नगदेबाली उत्पादकालागि प्रोत्सान गर्ने बोहराको योजना छ ।
बेदकोटलाई नगर र ग्रामिण क्षेत्र गरि विकासका गतिविधी थाल्नुपर्ने उनी बताउछन् । नगर क्षेत्र भन्नाले ‘कमर्सियल’ कारोबारी र ग्रामिण भन्नाले खेती किसानी सहितको क्षेत्रको रुपमा प्रर्याप्त विकास गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा मेयरका उम्मेदवार बोहराले परिकल्पना गरेका छन् । बेदकोटको अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको हुँदा, कृषि र कृषकहरुको जीनव स्तर उकास्ने, आर्थिक रुपमा सक्षम र सबल बनाउने आफ्नो पहिलो काम हुँने उनी बताउछन् ।
बेदकोटका जनताको धेरैलामो संघर्ष र बलिदान पछि छैला औद्योगिक क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको छ । छैला औद्योगिक क्षेत्रलाई साच्चिकैको औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, त्यसमा कमभन्दा कम शुल्क लिएर उद्योगी व्यापारीहरुलाई उद्योग स्थापनाका लागि आव्हन गर्ने मेयरका उम्मेदवार बोहराको भनाई छ ।
छैला औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तिमा १ उद्योगमा १० जनाले रोजगारी पाएपनि १०० उद्योगका १ हजार जनाले क्षमता अनुसारको रोजगारी पाउने मेयरका उम्मेदवार बोहराको तर्क छ । बेदकोटको छेला औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुँने उद्योगहरुले प्रयाप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेछ । बेदकोटमा रोजगारकालागि उद्योग, आय–आर्जनका लागि उद्योग, जिवन स्तर उकास्नका लागि उद्योग, समाजिक सद्भावका लागि उद्योगहरु स्थापना गर्ने कांग्रेसबाट मेयरका उम्मेदवार बोहरा बताउछन् ।
‘रोजगारीको अभावकाकारण मान्छेहरु भारत लगायत खाडी मुलुकमा चर्को राप, ताप सहन बाध्य छन् । बाहिरबाट समाजमा पैसा आएपनि समाजिक सद्भाव खल्बलिरहेको छ । त्यसको न्यूनिकरणका लागि स्थानीय रोजगारी आवश्यक छ ।’ मेयरका उम्मेदवार बोहराले भने–‘तसर्थ बेदकोटमा रोजगारीका लागि उद्योगहरु भित्र्याउछौं । उद्योगीहरुलाई पनि नगरपालिकाले भ्याउने सम्मको करछुट गर्ने व्यवस्था गर्छौ । उद्योगीहरुलाई धन्यवाद सहित पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था समेत गर्छौ ।’
कृषि, पर्यटन र उद्योग बेदकोट नगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार भोजराज बोहराको पहिलो संकल्प हो । बेदकोटमा पौराणिक महत्व बोकेका दर्जनौं धार्मीक, सांकृतिक क्षेत्रहरु छन् । तिनीहरुको प्राकृतिक सुगन्ध सहित पर्यटन प्रर्वद्धनमा बोहराले बिशेष चाँसो राखेका छन् ।
नगर क्षेत्रमा रहेका धार्मीक पर्यटकीय गन्तव्यहरु बेदकोट ताल, छेला बैजनाथ धाम, भीमदत्त र बेदकोटको सीमानामा रहेको रौटेला बैजनाथ धाम लिङ्गा क्षेत्रमा तिनीहरुको धार्मीक सांस्कृतिक महत्व जर्गेना गर्ने गरी काम थाल्ने मेयरका उम्मेदवार बोहरा बताउछन् ।
नगरपालिकाले बेदकोट तालमा माछा पालनको सुरुवात धार्मीक तथा सांस्कृतिक महत्वलाई संकटमा पार्न खोजेको उनी बताउछन् । निकै सुन्दर र लोपोन्मुख साइबेरियन हाँसहरु पाइने स्थान हो, बेदकोट ताल । तर नगरपालिकाको एक गतल निर्णयका कारण बेदकोट ताल माछा पोखरीमा परिणत भएको छ । त्यो बेदकोट ताललाई पुरानो लयमा अर्थात प्राकृतिक सुगन्ध कसरी दिलाउने भन्नेबारे आफुले रणनीति बनाएको मेयरका उम्मेदवार बोहरा बताउछन् ।
प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई प्राकृतिक सुगन्धका साथ पर्यटन विकास तथा प्रर्वद्धनमा जोड दिदै बेदकोटलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको गन्तव्य बनाउने उनको लक्ष्य छ ।
किसानहरुका लागि माटो सुहाउदो नगदेवालीहरु उखु, दलहन, तेलहन, अल्सी जस्ताबालीका लागि प्रोत्साहन गर्ने मेयरका उम्मेदवार बोहरा बताउछन् । नगर क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा सहितको नगर अस्पतालको बनाउने योजना बोहराले बुनेकाछन् ।
मेयरका उम्मेदवार बोहराको राजनैतिक पृष्ठभूमिः
नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति सुरु गरेका नेता भोजराज बोहरालाई नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरको १४ वर्ष जिल्ला सचिव रहेर पार्टी चलाएको अनुभव छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले उनलाई बेदकोटमा मेयर पदको उम्मेदवार बनाएको थियो । तत्कालिन एमालेका नेता अशोक चन्दसंग पराजित भएका थिए ।
२०२१ सालमा डडेल्धुराको चौसालमा जन्मनु भएका नेता बोहराले प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उत्तिण हुन् । पढाईमा निकै तजस्वी बोहराले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०४९ मा एम.वि.ए. प्रथम श्रेणीमा उत्तिण गरेका हुन् । नेता बोहराले नेपाल कमर्श क्याम्पसमा २०५० देखि ०५२ सम्म प्राध्यापन समेत गरे ।
२०३५ सालमा महेन्द्रनगर माविमा पढ्दै गर्दा नेता बोहराले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को स्कुल इकाई कमिटिबाट राजनीति सुरु गरेका हुन् । २०३६ सालको जनमत संग्रमा सक्रिय रहेको नेता बोहरा सोहि वर्ष नेविसंघ कञ्चनपुरको जिल्ला सदस्य भए ।
२०४३ मा उनी नेपाल कमर्श क्याम्पस नयाँ बानेश्वर काठमाण्डौंको इकाई सह–सचिवमा भए । लगत्तै सोहि वर्ष नेता बोहरा नेवि संघ डडेल्धुराको जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।
२०४६ मा उनी नेवि संघको त्रिभुवन विश्वविद्यालय समिति सदस्य तथा व्यवस्थापन संकायको संयोजक भए । ०४६ मा काठमाण्डौंको चाक्सीवारी र ०४७ मा दशरथ रंगशालामा भएको नेपाली कांग्रेसको महासम्मेलनमा उनी डडेल्धुराबाट प्रतिनिधि भएर सहभागी भए ।
०४६ को राष्ट्रिय जन आन्दोलनमा कांग्रेस नेता बोहरा सक्रिय रहे । उनले हरेक समयमा भएका राष्ट्रिय तथा स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको ९ औं महाधिवेशनमा उनी कञ्चनपुर क्षेत्र नं.२ बाट महा समिति सदस्यमा निर्वाचित भए । पोखरामा भएको १० औं महाधिवेशनमा उनी कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधी भए । पार्टीको ११ औं महाधिवेशनमा नेता बोहरा महा समिति सदस्यमा निर्वाचित भए ।
०५४–०५८ सम्म नेता बोहरा पुनःस्थापित नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय तदर्थ समिति सदस्य बसे । २०५७ देखि ०५९ असोज सम्म नेता बोहरा नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरको जिल्ला सचिव पदमा रहे । उनी पुनः ०६२ देखि ०७३ सम्म गरेर १४ वर्ष गरेर पार्टीको जिल्ला सचिव पदमा बसे ।
२०४६ सालको राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा सक्रिय रहेका नेता बोहरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाल प्राध्यापक संघको कार्यक्रबाट गिरफ्तार भई ७ दिन सम्म बग्घीखानाको थुनामा परेका थिए । नेपाल प्रजातन्त्र स्थापनाकालागि गरिएका प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएका उनी कञ्चनपुरबाट पटक–पटक थुनामा रहेका थिए ।
जनआन्दोलनका क्रममा ०६० चैत्र १ गते महेन्द्रनगर बजारबाट गिरफ्तार भई कञ्चनपुरको कारागारमा दुई महिना सम्म बन्दी बनाइएका थिए । सोही आन्दोलमा गिरफ्तार पछी प्रहरी कुट्दा नेता बोहराको कानको जाली समेत फुटेकी थियो ।
गत पटको स्थानीय निर्वाचनमा बेदकोट नगरपालिकाबाट मेयर पदको उम्मेदवार रहेका उनी थोरै मतले एमाले नेता अशोक चन्द संग पराजित भएका थिए ।